အကဉျြးထောငျတှနေဲ့ အကဉျြးသားတှရေဲ့ လိုအပျခကျြ စုစုပေါငျး ၁၅၀နီးပါး လူအခှငျ့အရေးကျောမရှငျတှရှေိ့ – Voice of Myanmar
မန်တလေး၊ သွဂုတျ ၁၅-၂၀၂၀
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျက ကျောမရှငျစတငျဖှဲ့စညျးခြိနျကနေ ၂၀၂၀ပွညျ့နှဈ ဇူလိုငျလအထိ အကဉျြးထောငျ (၁၀)ခု ၊ အကဉျြးစခနျး (၈)ခု ၊ ရဲစခနျး အခြုပျခနျး (၈)ခု ၊ တရားရုံးအခြုပျခနျး (၇)ခု နဲ့ ဆေးရုံအခြုပျခနျး (၅)ခုတို့ကို သှားရောကျစဈဆေးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
အကဉျြးထောငျ ၊ အကဉျြးစခနျး ၊ အခြုပျခနျးမြား ကွညျ့ရှုစဈဆေးခြိနျမှာ စဈဆေးရေးအဖှဲ့နဲ့ တှလေို့တဲ့ အကဉျြးသူ/ အကဉျြးသား ၊အခြုပျသား/ အခြုပျသူ (၃၆၁)ဦးကို သီးခွားတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး သူတို့၏ အခကျအခဲမြား လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရမှုမြား ၊ တရားရေးဆိုငျရာ တငျပွခကျြမြားအပျေါ မှတျသားစီစဈပွီး တှရှေိ့ခကျြတှကေို အကွံပွုခကျြတှကေို ပွညျထောငျစုအဆငျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားကို အကွောငျကွားတာတှလေုပျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
အကွံပွုခကျြတှထေဲမှာ အုပျခြုပျမှုဆိုငျရာ အခကျအခဲက အမြားဆုံးဖွဈပွီး ကနျြးမာရေးဆိုငျရာလိုအပျခကျြက ဒုတိယအမြားဆုံးဖွဈနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ အခွားသော သနျ့ရှငျးရေးဆိုငျရာ အခကျအခဲအမြား အဆောကျအဦးဆိုငျရာအခကျအခဲမြား ပညာရေးဆိုငျရာအခကျအခဲမြား အကဉျြးထောငျပွောငျးရှလေို့ခွငျးဆိုငျရာ မြား စတဲ့အခကျြပေါငျး ၁၄၇ ခကျြကို တှရှေိ့ရတယျလို့သိရပါတယျ။
အဲ့ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ပတျသတျပွီး မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ ဥက်ကဌ ဦးလှမွငျ့ကိုမေးမွနျးရာမှာတော့
VOM – အကဉျြးစခနျးတှကေိုသှားရောကျစဈဆေးရာမှာ အဓိကအနနေဲ့ ဘယျလိုပွသနာတှကေိုတှရေ့လဲ။
ဦးလှမွငျ့ – ထောငျတှကေတော့ အမြားအားဖွငျ့ တူနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီဟာက ဘာလဲဆိုတော့ ထောငျတှအေားလုံး လူကပျြနတော လူတှကေ အရမျးမြားနပွေီးတော့ နရောကကဉျြးကပျြတယျ။ သူတို့ကို ထားပုံသိုပုံ၊ နရေတဲ့အနအေထားကကောငျးရဲ့လား၊ မကောငျးဘူးလား ဘာတှမြေားဆုံးရှံးနလေဲ၊ ဘာတှလေိုအပျလဲ၊ ဘာတှအေခကျအခဲရှိလဲ ဆရာတို့စဈတဲ့အခါမှာ တဈခါတလမှော သူတို့ personally အခကျအခဲတှေ ရှိနတောပေါ့။ ဥပမာ ဆေးဝါးကုသရာမှာလိုအပျတဲ့ဆေးမရတာတို့ ကုသခှငျ့မရတာတို့ တှရေ့ပါတယျ ။
VOM – စဈဆေးတဲ့အခါမှာ သီးခွားစဈဆေးခဲ့တာလား။
ဦးလှမွငျ့ – ကွိုတော့မလုပျဖူး၊ လာမယျဆိုတာ ကပျပွောလိုကျတာပဲ၊ ဆရာတို့ ပွောတဲ့အခြိနျနဲ့ စဈတဲ့အခြိနျကတော့ သိပျကှာလမေ့ရှိပါဘူး။ လူတှကေပွောကွမှာပေါ့ ကွိုပွောရငျ ထောငျကကွိုပွငျမှာပေါ့ တကယျတော့အဲ့လောကျအခြိနျလညျးမရပါဘူး။ ထောငျတှကေမြားသောအားဖွငျ့ လူအမြားကွီးလေ နောကျတခုက လူတှမေသိသေးတာ ဆရာတို့အနနေဲ့က အကဉျြးသားတှကေို လှတျလှတျလပျလပျတှခှေ့ငျ့ရှိတယျ။ ဒီတော့ သူတို့ဘာတှပေဲပွငျထားပွငျထား အကဉျြးကနြတေဲ့သူတှကေတော့ပွောတာပဲ၊ အဲ့ဒီလိုပွောတဲ့အခါမှာ သူတို့အနနေဲ့ဘာမှလုပျလို့မရဘူး။ အဲ့ဒီတော့တျောတျောမြားမြားက သိရပါတယျ။
VOM – ထောငျဒဏျနှဈရှညျကနြသေူတှေ ပွဈမှုနဲ့ပွဈဒဏျမမြှတာတှနေဲ့ အရငျနှဈကလှတျငွိမျးနဲ့ မပါတာတှကေ ဘယျလိုကွောငျ့လဲ။
ဦးလှမွငျ့ – မပါတာတှကေတော့ case တှရှေိတယျ။ ဥပမာ မူးယဈဆေးနဲ့ပတျသကျလို့ ဆေးသယျတဲ့အခါမှာ ဆိုငျကယျနဲ့သယျတယျဆိုပါတော့ မူးယဈဆေးနဲ့ပတျသကျလို့ လှတျတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ကိုမလှတျဖူး ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သယျတဲ့ဆိုငျကယျက လိုငျစငျမဲ့ဖွဈနရေငျ မျောတျောဆိုငျကယျမှုနဲ့ကနျြခဲ့မှာပေါ့ အဲ့တာမြိုး တှတေော့ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ အခွနေမှေနျကို ဆရာတို့က သကျဆိုငျရာကိုတငျပွရတာပေါ့ ။
VOM – အကဉျြးစခနျးတှကေိုသှားရောကျစဈဆေးရာမှာ အုပျခြုပျမှုပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ ကနျြးမာရေးပိုငျးမှာ အခကျအခဲအမြားဆုံးဖွဈနတောကိုတှရေ့တာက ဘာကွောငျ့လဲ။
ဦးလှမွငျ့ -အုပျခြုပျရေးဆိုတာကတော့ထောငျမှာရှိတဲ့အာဏာပိုငျတှေ ကိုငျတှယျပုံ၊ ကိုငျတှယျနညျးညံ့လို့ နညျးလမျးမကတြာပေါ့၊ ဒါတှကေ ဘယျကနသေိရလဲဆိုတော့ အငျတာဗြူးလိုကျတော့သိရတာပေါ့၊ ထောငျသားတှကေပွောပွတာပေါ့၊ ကနျြးမာရေးကတော့ ထောငျထဲမှာရှိတဲ့လူတခြို့တှကေ ရောဂါတှရှေိကွတယျ။ ဥပမာ ဌကျဖြားဖွဈနတောတို့၊ ဆေးပွတျသှားတာတို့ ဆေးမရတာတှဖွေဈတတျတယျ။ တခါတလကြေ သူ့ရောဂါအနအေထားကဖွဈနတေယျ၊ ကုဖို့မဖွဈတာတို့ အငျတာဗြူးလိုကျတော့သိရတာပေါ့လို့ ပွောပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျကို ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျောသမ်မတရုံးရဲ့ (၁၄ . ၁ . ၂၀၂၀) ရကျဆှဲပါ အမိနျ့အမှတျ ( ၃/၂၀၂၀) အရအသဈပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့တာဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
Photo – မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ
#voiceofmyanmar #VOM #လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ
အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက် စုစုပေါင်း ၁၅၀နီးပါး လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်တွေ့ရှိ
မန္တလေး၊ သြဂုတ် ၁၅-၂၀၂၀
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ကော်မရှင်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကနေ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လအထိ အကျဉ်းထောင် (၁၀)ခု ၊ အကျဉ်းစခန်း (၈)ခု ၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်း (၈)ခု ၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်း (၇)ခု နဲ့ ဆေးရုံအချုပ်ခန်း (၅)ခုတို့ကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အကျဉ်းထောင် ၊ အကျဉ်းစခန်း ၊ အချုပ်ခန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးချိန်မှာ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့လိုတဲ့ အကျဉ်းသူ/ အကျဉ်းသား ၊အချုပ်သား/ အချုပ်သူ (၃၆၁)ဦးကို သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့၏ အခက်အခဲများ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများ ၊ တရားရေးဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များအပေါ် မှတ်သားစီစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်တွေကို အကြံပြုချက်တွေကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများကို အကြောင်ကြားတာတွေလုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အကြံပြုချက်တွေထဲမှာ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲက အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်က ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခြားသော သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲအများ အဆောက်အဦးဆိုင်ရာအခက်အခဲများ ပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲများ အကျဉ်းထောင်ပြောင်းရွှေ့လိုခြင်းဆိုင်ရာ များ စတဲ့အချက်ပေါင်း ၁၄၇ ချက်ကို တွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးလှမြင့်ကိုမေးမြန်းရာမှာတော့
VOM – အကျဉ်းစခန်းတွေကိုသွားရောက်စစ်ဆေးရာမှာ အဓိကအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြသနာတွေကိုတွေ့ရလဲ။
ဦးလှမြင့် – ထောင်တွေကတော့ အများအားဖြင့် တူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဟာက ဘာလဲဆိုတော့ ထောင်တွေအားလုံး လူကျပ်နေတာ လူတွေက အရမ်းများနေပြီးတော့ နေရာကကျဉ်းကျပ်တယ်။ သူတို့ကို ထားပုံသိုပုံ၊ နေရတဲ့အနေအထားကကောင်းရဲ့လား၊ မကောင်းဘူးလား ဘာတွေများဆုံးရှံးနေလဲ၊ ဘာတွေလိုအပ်လဲ၊ ဘာတွေအခက်အခဲရှိလဲ ဆရာတို့စစ်တဲ့အခါမှာ တစ်ခါတလေမှာ သူတို့ personally အခက်အခဲတွေ ရှိနေတာပေါ့။ ဥပမာ ဆေးဝါးကုသရာမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးမရတာတို့ ကုသခွင့်မရတာတို့ တွေ့ရပါတယ် ။
VOM – စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ သီးခြားစစ်ဆေးခဲ့တာလား။
ဦးလှမြင့် – ကြိုတော့မလုပ်ဖူး၊ လာမယ်ဆိုတာ ကပ်ပြောလိုက်တာပဲ၊ ဆရာတို့ ပြောတဲ့အချိန်နဲ့ စစ်တဲ့အချိန်ကတော့ သိပ်ကွာလေ့မရှိပါဘူး။ လူတွေကပြောကြမှာပေါ့ ကြိုပြောရင် ထောင်ကကြိုပြင်မှာပေါ့ တကယ်တော့အဲ့လောက်အချိန်လည်းမရပါဘူး။ ထောင်တွေကများသောအားဖြင့် လူအများကြီးလေ နောက်တခုက လူတွေမသိသေးတာ ဆရာတို့အနေနဲ့က အကျဉ်းသားတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ခွင့်ရှိတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ဘာတွေပဲပြင်ထားပြင်ထား အကျဉ်းကျနေတဲ့သူတွေကတော့ပြောတာပဲ၊ အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာ သူတို့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ အဲ့ဒီတော့တော်တော်များများက သိရပါတယ်။
VOM – ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ကျနေသူတွေ ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်မမျှတာတွေနဲ့ အရင်နှစ်ကလွတ်ငြိမ်းနဲ့ မပါတာတွေက ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။
ဦးလှမြင့် – မပါတာတွေကတော့ case တွေရှိတယ်။ ဥပမာ မူးယစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆေးသယ်တဲ့အခါမှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့သယ်တယ်ဆိုပါတော့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ လွှတ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ကိုမလွှတ်ဖူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သယ်တဲ့ဆိုင်ကယ်က လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်နေရင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှုနဲ့ကျန်ခဲ့မှာပေါ့ အဲ့တာမျိုး တွေတော့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခြေနေမှန်ကို ဆရာတို့က သက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြရတာပေါ့ ။
VOM – အကျဉ်းစခန်းတွေကိုသွားရောက်စစ်ဆေးရာမှာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ကျန်းမာရေးပိုင်းမှာ အခက်အခဲအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာက ဘာကြောင့်လဲ။
ဦးလှမြင့် -အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကတော့ထောင်မှာရှိတဲ့အာဏာပိုင်တွေ ကိုင်တွယ်ပုံ၊ ကိုင်တွယ်နည်းညံ့လို့ နည်းလမ်းမကျတာပေါ့၊ ဒါတွေက ဘယ်ကနေသိရလဲဆိုတော့ အင်တာဗျူးလိုက်တော့သိရတာပေါ့၊ ထောင်သားတွေကပြောပြတာပေါ့၊ ကျန်းမာရေးကတော့ ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတချို့တွေက ရောဂါတွေရှိကြတယ်။ ဥပမာ ဌက်ဖျားဖြစ်နေတာတို့၊ ဆေးပြတ်သွားတာတို့ ဆေးမရတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ တခါတလေကျ သူ့ရောဂါအနေအထားကဖြစ်နေတယ်၊ ကုဖို့မဖြစ်တာတို့ အင်တာဗျူးလိုက်တော့သိရတာပေါ့လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ (၁၄ . ၁ . ၂၀၂၀) ရက်ဆွဲပါ အမိန့်အမှတ် ( ၃/၂၀၂၀) အရအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Photo – မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
#voiceofmyanmar #VOM #လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်